(ရခိုင်သတင်း) ငါမှားလား မင်းမှန်လား Yel Kaung | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ethnic Groups » (ရခိုင်သတင်း) ငါမှားလား မင်းမှန်လား Yel Kaung
(ရခိုင်သတင်း) ငါမှားလား မင်းမှန်လား Yel Kaung
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Jun 9, 2012 in Ethnic Groups, Myanma News | 79 comments
ရခိုင်မှာ ဘင်ဂါလီများသောင်းကျန်းနေပုံ သတင်းမှားကို ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ချေဖျက်ပြီ
အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာရွာပေါင်း (၃၀)ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေး ခလေး လူကြီးနည်းဆုံး (၁၀၀)နီးပါး အကြမ်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ထိုသို့ သတ်ဖြတ်ရာတွင် ရခိုင်လူမျိုးအရပ်သားများက သတ်ဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စစ်သားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က အရပ်သားဟန်ဆောင်၍ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေကြောင်းသိရသည်။ မိုးဆယ်အုပ်စုက ရိုဟင်ဂျာရွာအားလုံး၊ ၃ မိုင် ၊ ၄မိုင် ရှိရိုဟင်ဂျာရွာများနှင့် မြို့ ဦး ဒူလာဖာရာရှိ ရိုဟင်ဂျာရွာအားလုံးရှိ အိမ်းပေါင်း ထောင်ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး အိမ်တွင်းနေ အိမ်သားများ အိမ်ပြင်ထွက်လာပါကအဆင်သင့် စောင့်နေသူ စစ်သား ရဲသားများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ အကြီးအကျယ်သတ်ဖြတ်နေကြောင်း သိရသည်။ ရိုဟင်ဂျာကို မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်နေသူများသည် ရခိုင်လူမျိုး ရဲတပ်ဇွဲ့ဝင်များ၊ န.စ.က တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် လုံထိန်းများနှင့် စစ်သားများသာဖြစ်ပြီး အရပ်သား ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းအသီးသီး၌ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရသည်။
ပြီး သား(၂)ဦးဖြစ်သူ အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် (၇) နှစ်အရွယ်တို့သည် ဖခင် အပြင်ထွက်ရာတွင် ပစ်ခတ်သေဆုံးသွားသည်ကို တွေ့ရှိသွားပြီး အပြင်မထွက်ရဲသဖြင့် အိမ်တွင်း၌ပင် မီးလောင်းသေဆုံးသွားကြောင်းအခုလေတင်သိရသည်။ သေဆုံးသူတို့၏ အလောင်းများကို စစ်ကားပေါ်တင်၍ အလောင်းများကို ဖျောက်ဖျက်နေကြောင်းလည်းဆိုကြသည်။ လုံထိန်း၊ရဲ၊ န.စ.ကနှင့် စစ်သားတို့၏ ပစ်ခတ်ခံရပြီး မသေဘဲ အသက်လုပြေးလာသူများနှင့် အိမ်မီးရှို့ခံရပြီးနောက် ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်လာသူတို့မှ ၎င်းသတင်း များကို စုံစမ်းသိနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီ သေဆုံး သတင်းတစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာသူတင်္စဦးနှင့် ကျွန်တော်စကားပြောနေပါသည်။ မိုဟာမက်စီဒီခ် အသက် ၅၅ နှစ်ခန့် ရာန်မောဂုနာ(ခ)ရေတွင်းကျွန်းမှဖြစ် ပြီး၊ ကော်ဘိရ်အာမတ်(အဘ) ရှော်ဘိရ် အသက် (၁၈)နှစ် ရေတွင်းကျွန်းတို့သည်လည်းသေနတ် ဒဏ်ရာဖြင့် ပြေးလာကာ အခုစကားပြောနေသည့် အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း၌ သေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။
မောင်ရင့်သတင်း မှန်မမှန် ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါအုံး…. မင်းဘာကောင်လဲ ငါဘာကောင်လဲ… အကျယ် ချဲ့ပြီး ရှည်ရှည်ပြောမနေတော့ဘူး သဘောပေါက်
ဓာတ်ပုံတွေကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါ.. ကျုပ်တို့အမျိုး ရခိုင်တွေ၊ ရဲတွေ၊ စစ်သားတွေက အနိုင်ကျင့်၊ သတ်ဖြတ်၊ ရွာမီးရှို့နေတာလား
မောင်းတောက ရဲတွေ Yel Kaung ပြောသလို လုပ်လားမလုပ်လား အဲဒီမှာနေဖူးတဲ့ လူတယောက်ပြောထားတာလေးလည်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်
Htet Ag Linn
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးနေသူများကို လက်ငင်းလက်တုန့်ပြန်လိုသော်လည်း မောင်တောတွင် ၁နှစ်နေခဲ့ဖူးသောအတွှေ့အကြုံအရ
-မောင်တောဒေသတွင် UNHCR ခေါ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး ဖွင့်လှစ်ထားပီး အဆိုပါ Bingali များကို ဒုက္ခသည်အမည်တတ်ကာ UN မှအကာအကွယ်ပေးနေပါသည်
-၂၀၀၂ခုလောင်းဒုံရဲကင်း ဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သော ဘင်ဂါလီများကို စစ်ဆေးသောရဲတပ်ရင်း(၂) ရဲတပ်ရင်းမှုးကိုပင် အခက်အခဲဖြစ်အောင်UN မှကာဆီးခဲ့ဖူးပါသည်
-ကျနော်တို့မှပြန်လည်တုန့်ပြန်လျင် UN မှ Media အားကိုးကာ ပြန်လည်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းပြကာ တစ်စုံတရာပြန်လည်ပြုလုပ်ပေမည်
-သို့ပါသောကြောင့် အမေစုနှင့်သမတကြီးတို့၏ ခက်ခဲစွာကြိုးပမ်းမှုများ အရာမထင်အောင် မဆီမဆိုင်တာတွေနှင့် နှပ်ကြတော့မည်
credit: မှူးဇော်.. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=290196737744088&set=p.290196737744088&type=1&theater
တော်လိုက်တဲ့ ရွာစား … ရိုက်ချက်ကပြင်းပါ့ဗျာ…
ဒါနဲ့ BBC DVB VOA သူတို့ဂဘာဖစ်… ဖေ့ဘွတ်မှာနွားနဲ့တောင်နှိုင်းခံထိတာ ပျော်တယ်ထင်ပါ့
yel kaung ဆိုတဲ့ကောင်အရူးပဲ မင်းတို.ကုလားတွေ အမြင်ကတ်တယ် ငါတို.ကမင်းပြောသလိုဖြစ်စေချင်နေတာအခုလိုငြိမ်သွားတာတောင်စိတ်မကောင်းဘူး တကယ်ဆို စောက်ကုလားတွေ တမျိုးလုံးနှင်ထုတ်ပြစ်ရမှာ
min ko ko သို.
မင်းပြောသလိုဖြစ်စေချင်နေတာကွ မင်းတို.ကုလားတွေဇတ်ရူတ်တယ် အမျိုးရုတ်တယ် အပြတ်ဖြုတ်ချင်တယ်
သဒို့ခင်မျာလေးတွေမှာ ခြုံပုတ်ထဲက လက်ဝါးထောင်ပြနေကြရှာတာ
အပြင်ကိုတော့ ထွက်လာရဲဟန် မရှိပါဘူး
အထက်ကမိတ်ဆွေရေးထားတာ တစ်လွဲဖြစ်နေလားလို့ပါ။ ဘန်ဂါလီတွေက ဧည့်သည်တွေလေ။ အိမ်ရှင်ကြည်ဖြူအောင်နေရမှာပေါ့။ သူများအိမ်မှာလည်းလာနေသေးတယ်။ အိမ်ရှင်ကိုလည်း စော်ကားသေးတယ်ဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။
jon lay pyaw tar kaamhan bel
ရဲခေါင်နဲ့ ဇော်လေးဘာရေးထားမှန်းမသိ၊ မင်းကိုကိုဘာပြောမှန်းမသိပါ။
ဖျက်ချင်ရင် ကော်မန့်အားလုံးဖျက်ပါ။တော်ကြာသေချာမသိပဲ ဗမာတွေက ဆဲနေတယ်
မတရားလုပ်နေတယ် ဖြစ်နေဦးမယ် ဟဟ။
မဖျက်သေးဘူး ထင်တယ် ၊ Older Comments ထဲမယ် ရှာကြည့်လေ
အော် ဒင်းတို့တွေလဲ တ၀ီဝီနဲ့အော်နေတက်တဲ့ အနား နားက ခြင်လို
တဂျီဂျီနဲ့ အကျင့်က ….ဆိုးပေတာမို့၊ အေးဆေးနေထိုင်ကြပါ ။